Maitiro ekuisa mabhureki paDebian / Ubuntu uye zvigadzirwa | Linux Vakapindwa muropa
Mabhureki ndeye kodhi mhariri yatinogona kuwana kune yedu Gnu / Linux kugoverwa mahara. akaisa zvikomberedzo Iyo yakagadzirwa nekambani yeAdobe kunyange iri Mahara Software.
Mabhureki anotsigira mapulagi uye ekuwedzera-mairi anotendera kuwedzera ayo mashandiro uye maturusi asi chinonyanya kufadza ndechekuona chaiko kwazvinopa. Iri basa rinotibvumidza isu kuti tione chero dziviriro yewebhu yatiri kugadzirisa. Ndiro rimwe rebasa randinofarira zvakanyanya pamusoro pemupepeti uyu uye rinoita kuti ndirisarudze pamberi pevamwe vanyori vekodhi senge Atom kana Sublime Chinyorwa.
Mabhureki ane ehupenyu maonero basa iro rinotibatsira kusimudzira yedu yewebhu projekiti
Iyo yazvino vhezheni yeBrackets inogona kuiswa mune yedu Debian-based kugovera, kune izvi isu tinongofanirwa kuenda kwazviri iyo yepamutemo webhusaiti uye dhawunirodha iyo package yedhi inoenderana nepuratifomu yedu. Asi mune kumwe kugovera seUbuntu, iyi nzira yekumisikidza inogona kunetsa se Mabhureki anoda iyo libgcrypt11 raibhurari uye Ubuntu haina iyo mushanduro dzayo dzichangoburwa.
Kugadzirisa dambudziko iri, isu tinogona kuisa raibhurari zvakazvimiririra kana isu tinoshandisa yakajairwa repository inogadzirisa dambudziko iri. Ini pachangu, ini ndinosarudza iyo yekupedzisira uye yewebhuupd8 repository, repository inosangana nezvose zvatinoda. Saka isu tinovhura terminal uye tinonyora zvinotevera:
Nezvo, iyo Brackets mupepeti ichaiswa uye mushure memaminetsi akatiwandei ekumisikidza tichava nayo yakagadzirira kushandisa uye kugadzira edu ewebhu kunyorera, handizvo here?
ZVAKAITWA: Adobe yakamira kugadzira Mabhureki mushure mechibvumirano neMicrosoft munaGunyana 1, 2021, uye kubva ipapo hapana vhezheni yakagadziridzwa yeLinux. Hongu isu tinogona kuisa izvo zvinotsanangurwa pano (v1.13), iyo package Snap (v1.11) uye Flatpak (v1.14.1). Ruzivo rwakawanda, pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa mabhureki paDebian / Ubuntu uye zvigadzirwa
Shasha hama, ndakabata pfungwa yeiyo yakadzama yeshoko rekutenga uye ndashandisa atomu kusvika zvino asi ndinofara nezano rekushanda zvakare nechishandiso senge dreamweaver
Pindura kuna Angeluz
Ndanga ndichivandudza paUbuntu kwenguva pfupi. Ini parizvino ndinoshandisa Eclipse. Asi izvo zvandinonyatsosuwa iwo ma dreamweaver matemplate, kuti nekuvandudza chinongedzo mumenyu, izvi zvinogadziridzwa mumafaira ese anoshandisa iyo template. Pane here chimwe chinhu chakafanana mumabhureki kana chero imwe ide kana mupepeti?
mmm ini ndakasiya imwe yakazara yakazara dzidziso pane yangu blog, kana iwe uchifarira, pasina kuwedzera iyo ppa. Kana iwe uchifarira, rega vazive xD
asi shandisa blog yako, zvingave zvinobatsira kwazvo, ndiri kunyanya kutsvaga mupepeti anobata Java mapakeji kana akasungirirwa kune jdk 8 kana openJDK JRE.
Inoda kuziva yakavhurwa sosi yekushandisa (kwete yakavhurwa sosi) inoda isingachashandi encryption raibhurari, kune imwe iriko yazvino, libgcrypt1.
Ini handina kuwana package.